Bakhala ngemisebenzi ethathwa ngabokufika - Bayede News
Home » Bakhala ngemisebenzi ethathwa ngabokufika
Intokazi enamagalelo kunobhutshuzwayo kuleli
Izakhamuzi zaseMusina, eLimpopo, zimashele ezinkampanini ezizimele nasezinxanxatheleni zezitolo ngoba zifuna ukunikwa imisebenzi okuqashwe kuyo abokufika kuleli.
Laba abebemasha bathi bafuna imisebenzi engamaphesenti angama-85 inikezwe izakhamuzi zaseNingizimu Afrika.
“Bekani izakhamuzi zaseMusina phambili, bekani izakhamuzi zaseNingizimu Afrika phambili,” lawo bekungamazwi abeshiwo ilabo abebemasha belibhekise emahhovisi eminyango kaHulumeni nasezinkampani ezizimele ngoLwesibili.
Lezi zakhamuzi zethule incwadi yezikhalo zazo kuMasipala wendawo, zadlulela esibhedlela, emaphoyiseni, ezakhiweni zabezicishamlilo, kuMnyango Wezabasebenzi noWezasekhaya, enkampanini yokwakha zase zilibhekisa enxanxatheleni yezitolo iMusina lapho zifike zanikeza ubuholi bale nxanxathela kanye nabanini zitolo.
Bezisola inkampani yokwakha kanye nenxanxathela yezitolo ngokuqasha abokufika.
Umholi womphakathi uMnu uFreedom Boikanyo uthe: “Sifuna uMnyango Wezabasebenzi wenze uphenyo ukuthi lezi zinkampani ziziholela malini izisebenzi ngoba siyazi ukuthi abokufika bayakuthatha okuncane kunalokhu okulindelekile.”
Izakhamuzi ziphinde zasola labo abokufika ngokuba nombombayi bomazisi, bathi bahlala ezindlini zemxhaso kaHulumeni emalokishini. ElaboHlanga oshicilelweni lwamhla ziyisi-8 kuNhlaba labika ngodaba olwaluthi “Inkankane nenkane alidle ngakubo” ngenkathi izakhamuzi ezazikhulume nalo zithi isithebe sanele abegceke abokufika abagoduke. Kulolu daba lwaseMusina linokuxhumana nalolu lwalabo bokufika abakhuluma naleli phephandaba abahlala eMgungundlovu ngoba babethi imsebenzi abayenzayo ukwakha futhi bahlala endlini ewumxhaso kaHulumeni.
Nabo baveza ukuthi bayazithola izinsongo ngoba kuthiwa imisebenzi bayithola ngoba bathatha imali encane nokuthi izingane zabo zithola isibonelelo sikaHulumeni.
Abamukele uhlu lwezikhalo bathembise ukuthi bazophendula zingakapheli izinsuku eziyisikhombisa.